Astaamaha villa birta fudud iyo dhismaha nidaamka
Fudud bir bir ah, oo sidoo kale loo yaqaan guriyeynta qaabdhismeedka birta nalka, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa laga sameeyaa faleebooyin bir ah oo bir ah oo bir ah oo aluminium bir ah lagu dhejiyay. Qaab dhismeedka aluminium-zinc ee aluminium-zinc saxan bir ah wuxuu ka kooban yahay 55% aluminium, ...
Dhawaan, suuqa guryaha ayaa qarxay "dabaysha birta birta ah ee birta ka fududa", waxan cusub ayaa sababay in dad badani ay fiiro gaar ah u yeeshaan. Guri bir bir ah ayaa ka soo muuqday Shiinaha 1990-yadii. Maanta, tikniyoolajiyadda dhismaha qaab-dhismeedka biraha waa mid qaan-gaar ah, oo uu dalalku horumariyay, oo ay leedahay o ...
Waxaa jira sababo qotodheer sababta nidaamka birta birta ah ee birta ah, oo ay kujiraan guryo dabaqyo iyo dabaqyo iyo dabaqyo ah, ay si xawli leh u kobcayaan. Marka loo barbardhigo qaababka kale ee guryaha qaabdhismeedka birta, nidaamka guryaha isku dhafan ee birta ah ee TUOOU, gaar ahaan jilicsanaanta jilicsan ee qaab-dhismeedka ...
Bishii Maarso 2, Mudane Robert, oo ah macmiil u dhashay Australia, ayaa mar labaad u yimid shirkadeena. Tani waa markiisii ​​saddexaad oo uu yimaado Shiinaha iyo tuoou. Ka dib fahamkii ugu horreeyay ee hordhaca ah, qiimaynta guud ee labaad iyo guushii ugu dambaysay markan Mudane Robert wuxuu had iyo jeer carrabka ku adkeeyay inuu u baahan yahay xoogaa farsamo sare ah, aadanaha ...